MUQDISHU, Somalia- Hogaamiyaasha ka qeybgalaysa Shirka Madasha Wadatashiga Qaranka ee ka socda Muqdishu, ayaa magacaabay Gudi loogu magac-daray "Gudiga Qaranka ee Gurmadka Gargaarka Abaaraha", kaasoo ka kooban Sagaal xubnood oo matalaya DFS iyo maamul goboleedyada.
Wasiirka Warfaafinta Somalia Maxa'ed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa Shir jaraa'id oo ka dhacay Muqdishu ka shaaciyay Guddigan oo howshiisu noqon doonto isku-dubaridka howlaha Gargaarka ee la gaarsiin doono dadka abaartu saamaysay.
Maareeye, ayaa sidoo kale xusay in guddigan loo sameeyay si aysan u dhicin ilowshiyo yimaada marxaladda kala guurka ah, wuxuuna xusay in dhammaan mashaariicda hormarinta ee ka socda dalka loo wareejiyo dhinaca gar-gaarka deg deg ah.
Madaxda madasha, ayaa sidoo kale si wadajir ah u diray baaq caalami ah oo ku aadan sidii loogu gar-gaari lahaa dadka abaartu saamaysay.
Guddiga Gurmadka Abaaraha ayaa diyaarin doono qorshe wax looga qaban doono abaarta iyo diiwaangelinta baahida maamul kasta, oo deegaanadiisa ay ka jirto abaartu, sida uu sheegay Wasiir Maareeye.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda federaalka
Wasiirka Maaliyadda ee dowladda federaalka
Wasiirka Warfaafinta ee dowladda federaalka
Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland
Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo dowladaha hoose ee Koonfur Galbeed
Wasiirka Beeraha iyoo xanaanada Xoolaha ee Galmudug
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan
Gudoomiyaha Shabeellaha dhexe
Gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Xubno Farsamo, oo ka soco Hay'adda maareynta masiibooyinka Somalia, Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Maamulada Federaalka katirsan.
Madaxda madasha ayaa si wadajir ah u sheegay inay in xaaladda gobollada dalka qaybtood aad u liidato, sida Sool, Sanaag, Bari iyo deegaano katirsan Somaliland, Galmudug, Jubbaland iyo Hir-Shabeelle.
Waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen inay dhici karto xaalad adag oo sababi karta in dhimasho timaado xilli xoolihii dhammaad ku dhow yihiin.
Guddiga Gurmadka Abaaraha oo Puntland lacag soo gaarsiiyay
Soomaliya 13.02.2017. 21:54
GAROWE, Puntland- Xubno kasocday Guddiga Gurmadka Abaaraha Somalia ee heer Federaal ayaa maanta soo gaaray magaalo madaxda Puntland ee Garowe iyagoo kulan la qaaday Madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi.
Xubno saddex gaaraya oo loo soo wakiishay inay deeq lacageed ga ...
Lammaane Xafladda Guurkooda ku taageeray dadka abaaruhu saameeyeen
Puntland 17.03.2017. 22:53
Gaas oo raashin ganacsatada Puntland ku deeqeen u qaadey dadka abaareysan
Puntland 25.01.2017. 14:00
Puntland: Shacabka Bendar-Beyla oo baaq abaaraha ah u direy xukuumada Gaas [Dhageyso]
Puntland 05.01.2017. 15:11
​Gaas iyo Guddiga Abaaraha oo Garowe ku kulmay
Puntland 22.11.2016. 15:08
Madaxweynaha Puntland oo Garowe kasoo dagay [Dhagayso]
Puntland 22.03.2017. 15:30
Dowlada Puntland oo gawaari ku iibisay lacag loogu talagaley abaaraha [Dhageyso]
Puntland 06.03.2017. 20:53
Gaas oo la noqdey lacag lagu wareejiyey culimada Puntland
Puntland 22.02.2017. 23:57